ပလပ်စတစ်ခြောက်စက်၊ ပလပ်စတစ်ဖျက်စက်၊ ပလပ်စတစ်ဖလင်ဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း - ထုပ်ပိုးသည်
PP PE အလွှာ Granulating လိုင်း
PP Hollow စာရွက်စက်
PET Bottle Crusher သ...
Plastic Films Crushe...
Plastic Puses Crushe...
ပလတ်စတစ် Hard ပစ္စည်းများတစ်ခုတည်းရိုးဖျက်စီး
HDPE LDPE PP Films Compactor Pelletizing စက်
Rugao Packer Machinery Co. , LTD ။
RUGAO PACKER MACHINERY CO ။ , LTD သည်တရုတ်နိုင်ငံမှပလပ်စတစ်အခြောက်ခံစက်၊ ပလတ်စတစ်ကြိတ်ခွဲစက်၊ ကျနော်တို့စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုစက်အောင်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြသည်။ ပလတ်စတစ်ဖလင်များနှင့်လိုင်း granulating နှင့်သူတို့၏အရန်စက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလာကြသောဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးကောင်းသည့်စက်များကိုအမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းသည်။ ၂၀၁၅ နှစ် - ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပလတ်စတစ်စက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အလုပ်လုပ်သည်။ နည်းပညာအဖွဲ့။ ထိုအခါငါတို့သည်သုတေသနနှင့်ဒီဇိုင်းစက်တွေကိုစတင်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များစက်တွေကမ်းလှမ်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှု။ 2017-2021 ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်အမျိုးမျိုးကိုနိုင်ငံများစွာသို့တင်ပို့ခဲ့ပါသည်။ စပိန်လို မက္ကစီကို။ ဘရာဇီး။ ကိုလံဘီယာ။ ဗီယက်နမ်။ ပါလက်စတိုင်း အီသီယိုးပီးယား။ ဆီနီဂေါ။ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်အချို့သောအခြားနိုင်ငံများ။ ဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့စက်၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်း၊ ထိုကဲ့သို့သောပလပ်စတစ်အခြောက်ခံစက်၊ ပလတ်စတစ်ကြိတ်ခွဲစက်၊ ပလပ်စတစ်ဖျက်စက်များအကြောင်းမေးမြန်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ပလပ်စတစ်အခြောက်ခံစက်တွင်ဝက်အူ၊ တွန်းချ၊ ခွဲခြင်းနှင့်ရေခန်းခြောက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊
ပလပ်စတစ် granulator ၏စွမ်းအင်ချွေတာအကျိုးသက်ရောက်မှု
ဆေးထိုးစနစ်တွင်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်သုံးခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာပလပ်စတစ်အားအပူ၊ အရည်၊ ပလတ်စတစ်ဖြစ်စေရန်နှင့်စီးဆင်းမှုအခြေအနေသို့ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ခုသည်ဖိအားနှင့်အမြန်နှုန်းအောက်ရှိမှိုလိုင်ထဲသို့အရည်......
ပလပ်စတစ် crusher ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏သိပ္ပံနည်းကျအမည်မှာ polyester ဖြစ်ပြီး crystalline thermoplastic resin ဖြစ်သည်။ စွန့်ပစ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
လိပ်စာ: Jiuhua Town, Rugao City, Jiangsu Province, China
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Rugao Packer Machinery Co. , LTD ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။